ကြို့ထိုးရင် ဒါတွေ သတိထားလိုက်ပါ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကြို့ထိုးတာ အများစုက အန္တရာယ်မရှိတာပါ။ သို့သော် ကြို့ထိုးခြင်း အဆက်မပြတ် ဖြစ်လာပြီ 48 နာရီ ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ထားလို့မရဘူးဆိုတာသိထားရလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆိုးဝါးတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ၀င်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာအဖြစ် သင့်ကို သတိပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် မကြာခဏ ကြို့ထိုးခြင်း ဖြစ်ပျက်လာတာမျိုး သတိထားမိလာပြီဆိုရင်တော့ သင့်မိသားစု ဆရာ၀န်ထံမှ ကျန်းမာရေးအကြံဉာဏ်တွေ ရယူသင့်ပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် ကြို့ထိုးရတာလဲဆိုရင် လူ့ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းရင်ဘတ်နှင့် ၀မ်းဗိုက်အကြား စည်းခြားထားသလို ကာရံပေးထားတဲ့ ဒိုင်နယဖရမ် Diaphragm ခေါ် ရင်နှင့် ၀မ်းကြား တားထားတဲ့ ကြွက်သားမျှင်အလွှာကြီး၏ အတင်း ရုတ်တရက် အဓမ္မကြုံ့လာခြင်းကြောင့် (အသံအိုးအထက်နားက အဖုံးလေးတွေ ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်တာ) အသံထွက်လာပြီး တအေ့အေ့ တအွတ်အွတ် မသက်မသာ ကြို့ထိုးလာရခြင်းဖြစ်တယ်။
1. တစ်ခါတလေမှာ ကြို့ထိုးတာအန္တရာယ်မရှိပါ
ကြို့ထိုးခြင်းကို အစားလောကြီးပြီး မျိုချမိလိုက်လို့ လေပြွန်နဲ့ အစာရေမျိုကြား ကသိကအောက်ဖြစ်ပြီး လေပြွန်ထဲ အစာတွေ မ၀င်အောင် ပြန်ကန်ထုတ်ရာမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သို့သော် ပုံမှန်အားဖြင့် အရက်အများကြီးသောက်တတ်တဲ့ လူတွေနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေမှာ ကြို့ထိုးလေ့ရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး အစာအိမ်ကြီးတင်းလာစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းများအနက် တစ်ခုခုကြောင့်လည်း ကြို့ထိုးတတ်ပါသေးတယ်။ တစ်ဖန်ဆေးလိပ်သောက်တယ်ဆ်ိုတာနဲ့ လေကို တစ်ချိန်လုံး မျိုချနေသလိုဖြစ်တာကြောင့် ကြို့ထိုးလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရက်သောက်သူတွေမှာလည်း အရက်ရဲ့ပြင်းအားကြောင့် အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ကာ အစာရေမျိုကို ကသိကအောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့လည်း အက်စစ်တွေဟာ နောက်ပြန်စီးကာ အစာရေမျိုအား ပြဿနာပေးပြီး ကြို့ထိုးရတာပါ။
2. ကြို့ထိုးတာ မရပ်ဘဲ2ရက်လောက်ကြာလာရင်တော့ ဆရာ၀န်နှင့်ပြပါ
တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ 48 နာရီကျော်လာတဲ့အထိ မရပ်မနား ကြို့ထိုးလာပြီဆိုရင် ထိုသူမှာပြင်းထန်ဆိုးဝါးတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆို်တာ သတိပေးနှိုးဆော်တဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြင် စားချဥ့်ပြန်ရောဂါရှိတဲ့ လူနာတွေမှာလည်း ကြို့ထိုးတာဟာ ထိုရောဂါ၏ လက္ခဏာများအနက် တစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိမှာ နဂိုကတည်းက ထိုရောဂါ ရှိ/မရှိ သိထားရန် လိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အချို့သော ကင်ဆာရောဂါများမှာ အဆက်မပြတ်ကြို့ထိုးတာမျိုး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာဖော်ပြရရင် ဦးနှောက်ကင်ဆာ၊ ပြန်ရည်အကျိတ်ကင်ဆာ သို့မဟုတ် အစာအိမ်ကင်ဆာလို့ အမည်တပ်ခံရတဲ့ လူနာတွေမှာ ကြို့ထိုးတဲ့ေ၀ဒနာခံစားကြရပါတယ်။ နောက်ပြီး လေဖြတ်ခံရတဲ့ လူနာတွေမှာလည်း ကြို့ထိုးတတ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်မှန်းတော့ ယခုအချိန်ထိ တိတိကျကျ မသိရသေးဘူးလို့ ဆိုတယ်။
ကြို့ထိုးရာတွင် ရင်၀မ်းတားကြွက်သားလွှာကြီးကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ကြွက်သားတွေ အပြင်းအထန် လှုပ်ခါရာမှာ သိမ့်သိမ့်တုန်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရင်၀မ်းတား ကြွက်သားလွှာကြီးကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ အာရုံကြောမကြီး ထိခိုက် ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အဲဒီ အာရုံကြော ထိခိုက်ရခြင်းအကြောင်းဟာ လည်ပင်းမှာ အကြိတ်အဖု တစ်ခုခုရှိနေကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် လည်ပင်းကြီးရောဂါ ရှိနေကြောင်းလည်း ညွှန်ပြနေပါတယ်။
ရပ်မသွားဘဲ ကြို့ထိုးမြဲ ထိုးနေခြင်းက နှလုံးကြွက်သားတွေ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရဲ့ လက္ခဏာတွေ သို့မဟုတ် နှလုံးတိုက်ခိုက် ခံရခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေတောင် ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဆက်တိုက်ကြို့ထိုးခြင်း သို့မဟုတ် မကြာခဏဆိုသလို ကြို့ထိုးလာရင် နှလုံးကြွက်သားပတ်ပတ်လည်မှာ ရောင်ရမ်းနေခြင်း ကို ညွှန်ပြနေသလို နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရတော့မယ်ဆဲဆဲဆိုတဲ့ အခြေအနေကိုလည်း ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တာမို့ အလွန်အရေးကြီးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေမျိ်ုးတွေ့ခဲ့ရင် ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေဘဲ ဆရာ၀န် သို့မဟုတ် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမှာ သေချာပြသကာ ကုသမှုခံယူဖို့လိုတယ်။
တစ်ခါတလေ ကြို့ထိုးတာကိုတော့ ကြောက်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရုတ်တရက် ကြို့ထိုးပြီးအနေရခက်လာရင်တော့ ဒီလို လုပ်နိုင်ပါတယ်။
1. အသက်ရှူတာကို အချိန်အနည်းငယ်အောင့်လိုက်ပြီး၊ ပလတ်စတစ်အိတ်ငယ်တစ်ခုထဲသို့ မှုတ်ထုတ်လိုက်ပါ။
2. ဂွမ်းစတစ်ခုထိပ်မှာပါတဲ့ ဒုတ်တံလေးတစ်ချောင်းဖြင့် လည်ချောင်းနောက်ထဲသွားထိပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ပျို့အန်ချင်လာအောင် လုပ်ပါလေ။
3. ရေခဲရေဖြင့် ပလုတ်ကျင်းပါ။
4. သကြားခဲလေး သို့မဟုတ် ငှက်ပျောသီးမျိုချပါ။
5. သံပရာသီးတစ်လုံးကို ကိုက်ထား၍ ရင်ခေါင်းပေါ် ဒူးနှစ်ဘက်ဖြင့် ဖိကပ်လိုက်ပါ။
6. မျက်စိနှစ်ဘက်ပေါ် လက်ချောင်းများနှင့် ခပ်ဖွဖွ ဖိလိုက်ခြင်းဖြင့် ဗေးဂတ်စ်အာရုံကြောအား ကြို့မထိုးအောင် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါကြောင်း။
Vol: 13, No: 31, 11-5-2016